I-Zebula 48 Golf & Game Estate - I-Airbnb
I-Zebula 48 Golf & Game Estate
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Candace
IZenbu itholakala kuNdunankulu weZebula Golf Estate. Indlu yethu yokulala engu-2 iyindawo ekahle yokuphumula ngenkathi sijabulela izilwane ezinhle ezidlula kuvulandi wethu. Jabulela ichibi lethu, isimo somoya, izindawo zokuzijabulisa futhi wenze lokhu kube ikhaya lakho kude nasekhaya!
Sekushiwo kaningi, ayikho into exakayo njengokushona kwelanga lase-Afrika! Kungani ungazitholi endaweni ephambili yegalofu ngentengo ethengekayo !! Bheka imisebenzi ehlinzekwayo bese uhlala ujabule futhi ujabulele inhlanganisela yokuphumula okuphelele, ukuzizwisa igalofu yezinkanyezi ezi-5, ukwelashwa kwe-spa okusezingeni eliphezulu kanye nokuthinta impilo yasendle yase-Afrika.
4.80 · 149 okushiwo abanye
I-Zebula iyindawo yegalofu ephambili futhi njengoba igama lisho ukuthi kunesifundo esimangalisayo ongasidlala, njengoba kuphinde kube isiqiwu ozosidlala phakathi kwezilwane zasendle ezifana namadube, izindlulamithi, izinkonkoni, imbabala, izintshe, izintshe nokunye okuningi. Kukhona futhi uhla lokubeka oluluhlaza kanye nebanga le-tee.
IZebula ine-spa enhle, uhlu alupheli lwemisebenzi yokuphumula kanye nokwelashwa.
Kukhona indawo yokubhukuda, equkethe ijimu egcwele, inkundla yethenisi, kanye neziphuzo eduze nechibi.
Kukhona nepaki yezinyoka, indawo ebiyelwe yi-meerkat, futhi okubaluleke kakhulu ungathola ithuba lokuthatha isithombe sakho futhi udlale namabhubesi amabhubesi namahlosi.
Ingulule igijima, iZebula iyikhaya lezingulule ezine esezikhule ngokugcwele. Ingulule ingafinyelela ku-100km/h emijahweni emifushane. Lokhu kuboniswa ekushoneni kwelanga lapho ungathola khona nethuba lokuthatha isithombe sakho.
Ukushayela kwezilwane, ungahlela ukuphuma uyogibela isilwane esiqiwini iMabalingwe lapho kuhwalala noma kusa, ukuze uthole ithuba lokubona noma yiziphi ezinhlanu ezinkulu. Khumbula ukuthi njengoba indawo yokulondoloza imvelo inkulu ngendlela emangalisayo nezilwane zasendle, akuqinisekwa ukuthi uzohlangana nazo.
Futhi, i-clubhouse inendawo yokudlela, i-inthanethi kanye nesitolo esincane ngakho-ke akudingeki ushiye ucezu lwethu oluncane lwepharadesi.